ဖတ်သင့်သော ebooks ကောင်းများ (knowledge base) — MYSTERY ZILLION
ဖတ်သင့်သော ebooks ကောင်းများ (knowledge base)
ကျနော်တို့ မြန်မာလူငယ်တွေ ကမ္ဘာ့နဲ့ရင်ဘောင်တန်းနိုင်ဖို့ အချိန်တိုတိုအတွင်းမှာ လုပ်နိုင်တဲ့နည်းကတော့ နာမည်ကြီး ပုဂ္ဂိုလ်တွေ (ဥပမာ Istein):D ရဲ့ အတွေ့အကြုံ အယူအဆတွေကို စုပ်ယူဖို့ပါပဲ။ သူတို့ရေးတဲ့စာအုပ်တွေ များများဖတ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်။ ဒါပေမဲ့ စာအုပ်ထဲပါတာတွေကိုအလကားစာတွေပါကွာလို့ သဘောထားမှုနဲ့ စာထဲပါတာမှန်သမျှ လုံးဝဥဿုံ ယုံကြည်တတ်မှု အစွန်းနှစ်ဘက်တော့ ရှောင်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။
The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-first Century, 2005-04
by Thomas L. Friedman (မြန်မာလိုဆိုရင်တော့ ကမ္ဘာပြားပြီတဲ့။ မြန်မာလိုဖတ်ချင်ရင်တော့ အရုန်သစ်တို့ဘာတို့မှာရှာဝယ်လို့ရပါတယ်)
(Stephen R. Covey ရဲ့နာမည်အကြီးဆုံးစာအုပ်တအုပ်ပါ။ မြန်မာဘာသာပြန်လဲရှိပါတယ်။ မူရင်းစာအုပ် ကော်ပီလည်း ရန်ကုန်ကစာအုပ်ဆိုင် (အာရုံသစ်) တွေမှာဝယ်လို့ရပါတယ်။ မဝယ်ချင်ရင်၊ ebook ဖတ်ရတာလဲအဆင်မပြေရင် American Resources Center (USIS) နဲ့ British Council Library နှစ်နေရာစလုံးမှ ငှါး၍ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ အရမ်းကောင်းတဲ့စာအုပ်တအုပ်ပါ။ ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်ကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။)
Dr Stephen Covey's inspirational book -7Habits Of Highly Effective PeopleВ®
Dr Stephen Covey isahugely influential management guru, whose book The Seven Habits Of Highly Effective People, becameablueprint for personal development when it was published in 1990. The Seven Habits are said by some to be easy to understand but not as easy to apply. Don't let the challenge daunt you: The 'Seven Habits' arearemarkable set of inspirational and aspirational standards for anyone who seeks to liveafull, purposeful and good life, and are applicable today more than ever, as the business world becomes more attuned to humanist concepts. Covey's values are full of integrity and humanity, and contrast strongly with the process-based ideologies that characterised management thinking in earlier times.
ဖတ်လို့ကောင်းရင် တင်တဲ့ Istein တော်လို့ဖြစ်ပြီး ဖတ်မကောင်းရင်တော့ စာရေးသူ ညံ့လို့ဖြစ်ပါတယ် (အလကားနောက်တာ ဖတ်လို့ကောင်းပါတယ်)
ကမ္ဘာပြားပြီကို မြန်မာပြန် သုံးအုပ်ရှိတယ်ကြားလို့။ ခုဆွဲတော့ ခဏပဲဗျ။ ဖတ်ချင်နေတာနဲ့အတော်ပဲ။
rapidshare ကလည်းဘာထဖောက်သလဲမသိဘူးဗျို့။ ဘာမှမသုံးဘဲ rs ကနေတိုက်ရိုက်ဆွဲလို့ရသဗျ။
Steven Covey ရဲ့သားလေ..Sean Covey လားမသိဘူး..သူရေးတဲ့ Seven Habits of Highly Effective Teens ဆိုတဲ့ဟာလေး ရရင်တင်ပေးပါလားဟင်:D
နောက်ပြီးတလက်စတည်း Napolean Hills ရဲ့ Think And Grow Rich လည်းဖတ်ချင်လို့။
မြန်မာပြန်ထက် မူရင်းဖတ်ရတာ ပိုနားလည်မယ်ထင်လို့။ ကူညီပါနော်:D
ရှိသမှ သိပ်ရှိ ဒါမျိုးဆို Istein ကရှာပေးမှာစိတ်ချ အတွဲလိုက်ပေးလိုက်ပြီ အဆင်မပြေရင်ပြော ပြန်ခွဲတင်ပေးမယ်။ လောလောဆယ်တော့ sendspace က ကိုတာပြည့်နေလို့ ဒေါင်းလို့မရသေးဘူး။ ကျနော်တို့က dynamic IP ဆိုတော့ အဲဒီတခုမကောင်းဘူး။
7 Psychological Secrets.pdf
8 Simple Step To Success.pdf
15 Minutes Guide to Winning Presentation.pdf
29 Leadership Secrets From Jack Welch.pdf
Hay House Attitude Is Everything For Success Say It Believe It Receive It eBook-LiB.chm
How to Get Anyone to Say Yes in 8 Minutes or Less.pdf
Mind Power - How to used and control your unlimited potentials.pdf
Power Up Your Mind - Learn Faster Work Smarter.pdf
The 100% Brain Course.pdf
Tony Buzan - Super Creativity.pdf
Napolean Hill вЂњThink and Grow Rich:A Black ChoiceвЂќ
Napoleon HillвЂ™s astonishing best-seller Think And Grow Rich formulated the principles of personal achievement, financial independence, and spiritual riches for more than ten million Americans. When he died, he left behindapartial manuscript tailoring his winning program forablack audience. The Napoleon Hill Foundation chose Dennis Kimbro to complete it.
Dr. Kimbro acknowledges the unique and enormous problems black Americans face, but he finds they are not insurmountable. He looks at the lives of successful black Americans (including Spike Lee, Oprah Winfrey, Thurgood Marshall, Florence Joyner, Frederick Douglass, Ron Leflore, Alex Haley), distills the secrets of their success, and combines that information with his own vast knowledge. The result isapowerful and inspiring recording that will give listeners the tools they need to make their own dreams come true.
So you've read Napoleon Hill's Think and Grow Rich and you might have an idea as to what the Hidden Secret he alludes to in the introduction of his book is. You see Napoleon Hill capitalize various words as DESIRE, THOUGHTS, and PERSISTENCE throughout his book and you know the secret has something to do with those things. It's in your grasp, but you can't seem to crystallize it to the point where it's in perfect focus.
The7Habit Of Highly Effective People ရဲ့ အဆက်ပါခင်ဗျာ အာကြီးရေးတာပါဘဲ
The 8th Habit ရဲ့ audio version ပါ
ISBN 1929494785 | 2005 Year | Audiobook | MP3 (128 kb/s) | 55.9 MB
motivation , hidden secrets , think and grow rich ရတယ်။
rs မှာတင်ထားတဲ့ဟာတွေ တစ်ခုမှဆွဲလို့မရဘူး။ တစ်ခြားမှာလုပ်ပေးပါဦး။
မြန်မာ စာရေးဆရာလေးယောက်လောက်် တနှစ်ထည်းမှာဝိုင်းဘာသာပြန်ထားတဲ့ စာအုပ်ကောင်း တအုပ်ပါ။
Rich Dad-Poor Dad Collection
Download link Folder You can download seperately